Malmö: Kooxihii ka baxay falal dembiyeedkii ay horey ugu jireen oo cabsi dareema | Somaliska
Malmö: Kooxihii ka baxay falal dembiyeedkii ay horey ugu jireen oo cabsi dareema
Mudooyinkii ugu dambeeyey Malmö, waxaa ay aheyd magaallo ay ka dhaceen falal dembiyeed oo qaarkood ay ku dhiteen dhalinyarro ka dhaxeeysay dirir, halka qaar kale ay dhaawac yihiin. Magaaladda waxaa sahal ah in hub la helo, hubkaan oo ah mid ay isku adeegsadeen dhalinayrro qaarkood ahaa asxaab markii dambane isu noqday cadow.
Si kasta oo ay arrini ahaato qaar ka mid ah kooxahaas ayaa ka tanasulay falalkii dembiyada ahaa ee noloshooda halista gelisay, hase ahaatee sidaas xaal kuma ekaan oo waxaaba ay qarka u saaran yihiin in markale la dilo sabab kastaaba ha ku dhacdee. Maamulka magaaladda Malmö ayaa haatan codsaday in la gacan siiyo 36 ruux oo doonaya ineey ka baxaan falalka dembiyeedka si ay u helaan nolol ka duwan tii ay ku jireen mudda dheer.
“Waa sanadkii labaad oo ay labbo jibaaranto tirada dadyowga doonaya iney nolol cusub bilaabaan” ayey tiri Helan Sjöman oo ah madax waaxeed ka tirsan suuqa shaqada iyo xafiiska arrimaha bulshadda. Waxaa ay intaa hadalkeeda ku dartay in shaqsiyaadkaasi ay dareemayaan cabsi iyo in la bar-tilmaameedsado iyagoona qaar ka mid ahi ay dadooda ka hooseeyso 18.
Xaaladda dhalinyaraddan dowladda ka codsaday in la siiyo caawinaad la xirriirta siddii ay noloshooda dabiici u soo laaban laheyd ayaa dowladu ku soo dhaweeysay gacmo furan. Waxaa haatan la qorsheynayaa in haddii ay ogol yihiin dhalinyaradan la geeyo meelo ka baxsan magaaladda Malmö si loogu sameeyo qorshe la noloshooda ku bad baadinayaan.
“Waanu caawin karnaa waana ka fogeeyn karnaa Malmö, laakin waa wado adag waxaanu sidoo kale raadineynaa goobo ay degaan iyo in ay iska diiwaan geliyaan xafiiska shaqadda, Taasi macnaheedu waa qofkii oo keligii ahaanaya” ayey tiri markale Helana oo misna hoosta ka xariiqaday in shaqsiyaadkaan ay ka dheeraanayaan eheladooda iyo asxaabtoodii.
Ugu dambeyntii dhalinyaradda ka baxa kooxihii taabacsanaayeen ee falal dambiyeedka ayaa qaarkood soo wajahadaa xaalado lugu cabsi gelinayo ama lugu wax yeeleeynayo. Sanadkii ina dhaafay ayaa magaaladda Göteborg waxaa bam gacmeed loo tuuray qoosy soomaali ah oo wiilkoodu ka mid ahaa dhalintii dilka ka geeysatay maqaayad ku taalay magaaladda. Gurigaas oo uu ku dhintay wiil yar oo sideed jir ah oo ay reerku qaraabo ahaayeen.
Moderat-ka oo doonaya in qeyb ka mid ah Malmö laga sameeyo goob aan la galin
Soomaali maandoorye soo gelin jirtay Noorweey oo gacanta lugu soo dhigay
Amineh Kakabaveh oo wali suuqa ku jidha Soomaalidana ku eedaysay labo wajiilenimo